Stay နဲ့ Live ဘယ်လိုကွာခြားလဲ ? - Myanmar Network
Stay နဲ့ Live ဘယ်လိုကွာခြားလဲ ?
Posted by AungKoU (UMK) on August 16, 2013 at 15:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
သင်တန်းသူ တစ်ယောက်က မေးလာပါတယ်၊ “stay နဲ့ live ဘာကွာပါသလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အစချီပြီး “ခုသူတို့က အဆောင်မှာ နေတာပါ၊ အဲဒါကို We live inahostel. လို့သုံးရမလား We stay inahostel. လို့သုံးရမလား သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ အငြင်းပွားနေလိုပါ” လို့ facebook message က မေးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြစ်သွားအောင် stay နဲ့ live က နေသည် လို့ မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူပေမဲ့ မတူညီတဲ့ အသုံးအနှုန်းပုံစံတွေကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Stay (v) - နေသည်
- Stay until the rain has stopped.
မိုးတိတ်တဲ့ အထိ နေပါလား။
- Can you stay after work to play tennis?
မင်း အလုပ်ပြီးရင် တင်းနစ် ကစားဖို့ နေလို့ ရမလား။
- Stay here until I come back.
ငါ ပြန်လာတဲ့အထိ ဒီမှာပဲ နေပါလား။
- I can only stayafew minutes.
ငါ ခဏလေးလောက်ပဲ နေနိုင်မယ်။
Stay (v) - နေသည်၊ ထားသည်၊ ရှိသည်၊ (ဆက်ဖြစ်သည့်၊ ဆက်လုပ်သည့် အဓိပ္ပာယ် ဆောင်ပါသည်။)
- The shops stay open until9o’ clock.
ဆိုင်တွေက ၉-နာရီအထိ ဖွင့်နေသေးတယ်။
- They stay friends after their divorce.
သူတို့ ကွားရှင်းပြတ်စဲ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း တွေ ဖြစ်နေသေးတယ်။
- Everything has stayed the same.
Stay (v) - ခတ္တနေသည်၊ တည်းခိုသည်။
- We stay inahotel.
ကျွန်တော်တို့ ဟော်တယ်မှာ တည်းတယ်။
- It’s late – why don’t stay in my house?
နောက်ကျနေပြီ၊ အိမ်မှာပဲ အိပ်လိုက်ပါလား။
- I stayed in Mandalay for two weeks then I flew home.
- ကျွန်တော် မန္တလေးမှာ ၂-ပတ်လောက် ခဏနေပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ (I fly home သည် လေယာဉ် နဲ့ ပြန်လာသည်ကို ဆိုလိုပါတယ်။)
Stay (n) - အလည်အပတ် နေခြင်း၊ ညအိပ်ခြင်း
- A two weeks stay with my uncle
- A short/ long stay inahotel
Live (v) - ရှင်သည်၊ အသက်ရှိသည်။
- He only livedafew days after the accident.
မတော်တဆ ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ရက်/ နှစ်ရက်လောက်ပဲ သူ အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။
- How long do elephants live?
ဆင်တွေက သက်တမ်း ဘယ်လောက်ရှည်လဲ
Live (v) - နေထိုင်သည်။
- I live in Yangon.
ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာ နေပါတယ်။
- Some students live on the University campus.
တစ်ချို့ကျောင်းသား/သူတွေက တက္ကသိုလ် ပရဝဏ် မှာပဲ နေကြတယ်။ (ကျောင်းထဲမှာပဲ နေကြတယ်)
Live (v) - နေသည်။
- He lived and diedabachelor.
သူက လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ အရိုးထုတ်သွားခဲ့တယ်။
- As he saved the money systematically when he was young, he can liveapeaceful life now.
သူငယ်ငယ်တုန်းက ပိုက်ဆံကို စနစ်တကျ စုဆောင်းခဲ့လို့ ခုအချိန်မှာ အေးအေး ချမ်းချမ်း နေနိုင်တယ်။
- John and Mary got married and lived happily ever after.
ဂျွန် နဲ့ မေရီ တို့ လက်ထပ်ပြီးတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ထာဝရ နေထိုင်သွားကြတယ်။
Live (v) - ရှင်သန်နေသည်။
- The memorable days will live in my heart forever.
ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲမှာ အမှတ်တရနေ့ရက်တွေဟာ အမြဲတမ်း ရှင်သန် နေမှာပါ။ (ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်သည်ကို ဆိုလိုပါတယ်။)
Permalink Reply by moe sandar on August 20, 2013 at 10:31
Permalink Reply by Khine Zin Oo on August 20, 2013 at 11:00
Thank you so much for your explanations Stay and Live.
Permalink Reply by hlaing hlaing win on August 20, 2013 at 15:21
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။(in the world နဲ့on the world ရဲ့ မတူတာကို သိပါရစေရှင့်။
Permalink Reply by atkhellboy on August 20, 2013 at 19:35
Hi, Hlaing Hlaing Win
Please havealook into following short paragraph from the website that what i always used to read ,someone have explained about the different between those two phrase,Hopefully you will be understood after the reading ..
"You can use "in the world" to talk inclusively about all of something that can be found throughout the world. A synonym is "on earth". Typically there would also beasuperlative in the sentence (as there was in the test question: "nicest"). Mount Everest is the highest mountain in the world.
Or you could use "in the world" to talk about everything inaparticular "world" (category):
Many well-known people in the world of sports are paid to promote specific products.
Regarding "on the world": you could use that inaphrase such as "a window on the world".
Or the word "on" could possibly be used to mean "about": He has interesting theories on the world of finance."
Permalink Reply by AungKoU (UMK) on August 21, 2013 at 18:11
Thanksalot to explain to Hlaing Hlaing Win on behalf of me.
Permalink Reply by ခါနွေဦး on August 20, 2013 at 20:47
Permalink Reply by myominlwin on August 20, 2013 at 21:21
Permalink Reply by Tint Tint Khine on August 22, 2013 at 10:14
Thanks for your explanation Sir !
Permalink Reply by venus on August 22, 2013 at 13:23
Thanksalot to explain.
Permalink Reply by than than on August 29, 2013 at 14:46
Thank you for your lesson because I didn't notice facts. That is you explain.
Permalink Reply by Soe Soe on August 29, 2013 at 16:02
Permalink Reply by saiheart on September 6, 2013 at 15:51
Thank you teacher. Now I can learn English without fees except charges for using Internet. I would like to know the difference between fees and charge or bill.